19 Akyiri yi, wɔkɔka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Hwɛ! Ɔhene resu, na ɔredi Absalom ho awerɛhow.”+ 2 Enti nkonim a wodii saa da no dan nnipa no nyinaa awerɛhow, efisɛ da no, nnipa no tee sɛ wɔrekeka sɛ: “Ɔhene redi ne ba no ho yaw.” 3 Na nnipa no wiawiaa wɔn ho baa kurow no mu+ saa da no, sɛnea nnipa a woguan ɔko mu de aniwu wiawia wɔn ho kɔ no. 4 Na ɔhene de, na wakata n’anim, na ɔhene kɔɔ so de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Me ba Absalom! Absalom, me ba yi, me ba yi!”+ 5 Na Yoab baa ɔhene nkyɛn wɔ fie hɔ bɛkae sɛ: “Wo nkoa a wɔagye wo kra+ ne wo mmabarima+ ne wo mmabea+ kra ne wo yerenom+ kra ne w’ayefam+ kra no, ɛnnɛ woahyɛ wɔn nyinaa aniwu, 6 efisɛ woadɔ w’atamfo na woatan w’adɔfo. Ɛnnɛ woakyerɛ sɛ asahene ne nkoa nyɛ hwee mma wo; ɛnnɛ na mahu sɛ, sɛ Absalom te nkwa mu na yɛn a yɛaka nyinaa awuwu nnɛ a, anka eye wɔ w’ani so. 7 Na afei sɔre fi adi, na kɔka asɛm bi kyerɛ wo nkoa fa dwudwo wɔn bo,+ efisɛ meka Yehowa ntam sɛ, sɛ woamfi adi a, obiara rentena wo ho anadwo yi,+ na anka ɛbɛkyɛn bɔne a aba wo so fi wo mmeranteberem de abedu sesɛɛ no nyinaa.” 8 Ɛnna ɔhene sɔre bɛtenaa kurow pon+ no mu, na wɔkɔka kyerɛɛ nnipa no nyinaa sɛ: “Ɔhene abɛtena kurow pon no mu.” Na nkurɔfo no nyinaa baa ɔhene anim. Na Israel de, na wɔaguan ma obiara kɔ ne fie.+ 9 Na nnipa no nyinaa ne wɔn ho hamee Israel mmusuakuw nyinaa mu, na wɔkae sɛ: “Ɔhene na ogyee yɛn fii yɛn atamfo nsam,+ na ɔno ara nso na oyii yɛn fii Filistifo nsam; seesei Absalom nti waguan afi asase yi so.+ 10 Na Absalom nso a yɛsraa no sii yɛn so+ no, wawu wɔ ɔko no mu.+ Enti afei dɛn nti na monkɔfaa ɔhene nsan mmae?”+ 11 Na Ɔhene Dawid soma kɔɔ ɔsɔfo Sadok+ ne ɔsɔfo Abiatar+ hɔ sɛ: “Monkɔka nkyerɛ Yuda mpanyimfo+ sɛ, ‘Dɛn nti na motwentwɛn mo nan ase sɛ mobɛba abɛfa ɔhene asan akɔ ne fie, bere a Israel nyinaa de nkra abrɛ ɔhene faako a ɔwɔ? 12 Me nuanom ne mo; me nnompe ne me honam ne mo.+ Na dɛn nti na motwentwɛn mo nan ase sɛ mobɛba abɛfa ɔhene asan akɔ?’ 13 Na Amasa nso, monka nkyerɛ no sɛ,+ ‘Ɛnyɛ me nnompe ne me honam ne wo? Sɛ woammɛyɛ ɔsahene ansi Yoab ananmu wɔ m’anim daa+ a, Onyankopɔn ntua me ka na ɔnsan mfa bi nka ho.’”+ 14 Na ɔmaa Yuda mmarima nyinaa koma dan bae sɛ onipa biako,+ enti wɔsoma kɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Wo ne wo nkoa nyinaa, monsan mmra.” 15 Na ɔhene san bae ara beduu Yordan ho. Yuda nso kɔɔ Gilgal+ sɛ wɔrekohyia ɔhene na wɔde ɔhene atwa Yordan. 16 Ɛnna Benyaminni Gera+ ba Simei+ a ofi Bahurim+ no yɛɛ ntɛm ne Yuda mmarima no kɔe sɛ wɔrekohyia Ɔhene Dawid. 17 Ɔrekɔ no, Benyaminfo mmarima apem kaa ne ho kɔe. (Ná Saul fie akoa Siba+ ne ne mma dunum+ ne ne nkoa aduonu nso ka ne ho, na wokotwaa Yordan kɔe ansa na ɔhene bae. 18 Na otwaa asutwaree+ no sɛ ɔrekɔfa ɔhene fiefo de wɔn atwa nsu no na wayɛ nea eye n’ani so.) Na Gera ba Simei bɛkotow ɔhene anim bere a ɔrebetwa Yordan no.+ 19 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Mma me wura mmmu me fɔ, na nkae bɔne a w’akoa yɛɛ wo+ da a me wura ɔhene fii Yerusalem kɔe no, na mma ɔhene mmfa nnhyɛ ne komam.+ 20 W’akoa nim sɛ me na mayɛ bɔne, enti na ɛnnɛ madi Yosef fie+ nyinaa kan abehyia me wura ɔhene yi.” 21 Ɛhɔ ara na Seruia+ ba Abisai+ kae sɛ: “Nea Simei yɛe no, ɛnyɛ owu na ɛfata no, sɛ́ wadome nea Yehowa asra no yi?”+ 22 Nanso Dawid kae sɛ: “Mo Seruia mma, dɛn na me ne mo wɔ yɛ+ a moasɔre atia+ me nnɛ yi? Ɛnnɛ yɛ da a ɛsɛ sɛ wokum obi wɔ Israel anaa?+ Minnim sɛ ɛnnɛ da yi midi hene wɔ Israel anaa?” 23 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ Simei sɛ: “Worenwu.” Na ɔhene kaa ntam kyerɛɛ no.+ 24 Saul banana Mefiboset+ behyiaa ɔhene. Ɔno de, efi da a ɔhene kɔe besi da a ɔbae asomdwoe mu no, na ɔnhohoroo ne nan ho mmubuu n’awerɛw,+ na ontwitwaa ne mfemfem+ na ɔnhoroo ne ntade. 25 Bere a ɔbaa Yerusalem behyiaa ɔhene no, ɔhene bisaa no sɛ: “Mefiboset, dɛn nti na wo ne me ankɔ?” 26 Ɛnna ɔkae sɛ: “Me wura ɔhene, me somfo+ no na ɔdaadaa me. W’akoa kae sɛ, ‘Ma menhyehyɛ afurum na mentena so ne ɔhene nkɔ,’ efisɛ w’akoa yɛ obubuafo.+ 27 Enti ɔbɛsɛee w’akoa din+ kyerɛɛ me wura. Nanso me wura ɔhene te sɛ nokware Nyankopɔn bɔfo,+ enti yɛ nea eye w’ani so. 28 Anka me papa fie nyinaa nsɛ hwee sɛ owu wɔ me wura ɔhene anim, nanso wode w’akoa aka wɔn a wodidi wo pon so+ no ho. Enti hokwan bɛn na mewɔ bio mpo sɛ mɛsan asu+ akyerɛ ɔhene?” 29 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Dɛn nti na woda so ara ka wo nsɛm yi? M’asɛm ne sɛ, wo ne Siba nkyɛ asase no.”+ 30 Na Mefiboset ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Seesei a me wura ɔhene asan aba ne fie asomdwoe mu yi, ma ɔmfa ne nyinaa mpo.”+ 31 Na Gileadni Basilai+ sian fi Rogelim bae sɛ ɔrebɛsen ne ɔhene akɔ Yordan ho na wakogya no wɔ Yordan ho. 32 Ná Basilai anyin yiye, na wadi mfe aduɔwɔtwe;+ ɔno na ɔmaa ɔhene aduan bere a ɔte Mahanaim no;+ ná ɔyɛ onipa kɛse paa.+ 33 Enti ɔhene ka kyerɛɛ Basilai sɛ: “Wo ne me ntwa nkɔ, na mɛma wo aduan me nkyɛn wɔ Yerusalem.”+ 34 Nanso Basilai ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Me nkwa nna a aka yɛ ahe na me ne ɔhene akɔ Yerusalem? 35 Madi mfe aduɔwɔtwe nnɛ.+ Mehu papa ne bɔne mu? W’akoa bɛte nea midi ne nea menom dɛ?+ Anaa mɛte+ mmarima ne mmea nnwontofo nne bio?+ Na dɛn nti na w’akoa mmɛyɛ adesoa+ bio mma me wura ɔhene? 36 Ɔkwan kakra bi na w’akoa ne ɔhene atwa abedu Yordan ho, na dɛn nti na ɔhene de ade a ɛte sɛɛ retua me ka?+ 37 Mesrɛ wo, ma w’akoa nsan na ma minwu+ wɔ me kurom, me papa ne me maame amusiei+ nkyɛn. Hwɛ, w’akoa Kimham+ ni. Ma ɔne me wura ɔhene ntwa nkɔ, na yɛ nea eye w’ani so ma no.” 38 Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Kimham ne me betwa akɔ, na mɛyɛ nea eye w’ani so ama no; nea wopɛ sɛ meyɛ biara mɛyɛ ama wo.” 39 Nnipa no nyinaa fii ase twaa Yordan, na ɔhene nso twae; Basilai de, ɔhene few n’ano,+ na ohyiraa+ no ma ɔsan n’akyi kɔɔ ne kurom. 40 Bere a ɔhene twa kɔɔ Gilgal+ no, Kimham ne no twae, na Yudafo nyinaa ne Israelfo fã nso de ɔhene twa kɔe. 41 Hwɛ! Israel mmarima nyinaa baa ɔhene nkyɛn, na wobisaa ɔhene sɛ: “Dɛn nti na+ yɛn nuanom Yuda mmarima no wiaa wo sɛ wɔde ɔhene ne ne fiefo ne Dawid mmarima a wɔka ne ho nyinaa betwa Yordan?”+ 42 Ɛnna Yuda mmarima nyinaa buaa Israel mmarima sɛ: “Efisɛ yɛn na ɔhene bɛn yɛn paa,+ na dɛn nti na moama asɛm yi ahyɛ mo abufuw? Yɛadi ɔhene ho biribi, anaa wakyɛ yɛn biribi?” 43 Ɛnna Israel mmarima ka kyerɛɛ Yuda mmarima sɛ: “Yɛwɔ kyɛfa du ahenni no mu,+ enti yɛdɔɔso sen mo Dawid mu. Dɛn nti na moabu yɛn animtiaa, na dɛn nti na moamma yɛanni kan+ anka sɛ yɛrekɔfa yɛn hene asan aba?” Nanso Yuda mmarima ano yɛɛ den sen Israel mmarima.